TLỌ AKW ManufKWỌ Ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebubata ya - China ATTACHMENTS Factory
Typesdị bọket niile nke Bonovo.
Bonovo debe bọket zuru ezu na mgbakwunye na ụdị "S" na ngwaahịa ugbu a.
BONOVO na-enye ịwụ ịwụ zuru ezu maka ndị na-egwupụta ihe. Nke a akara nke pin-on na Hinges maka CW Coupler bọket Njirimara ka mma iji zuru uru nke ụba igwe ike.
OOLỌ DRLỌ UMLỌ UMLỌ UMLỌ UMLỌ
Bonovo Compaction wheel na-enyere aka ime ka obi sie ike na a na-eme ngwa ngwa ngwa ngwa karịa ngwa ngwa. Ha nwere ike imekwu ihe na obere akwa na akwa na onye ọrụ na igwe. Ejiri Bonovo compaction wiil iji rụọ ma wuo ka ọ dịrị.
A na-eji Bonovo Plate Compactor kpokọta ụfọdụ ala na gravel maka ọrụ owuwu nke chọrọ nkwụnye ala. Ọ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma ebe ọ bụla ebe a na-egwupụta ma ọ bụ azụ azụ nwere ike iru: na olulu, n'elu na gburugburu ọkpọkọ, ma ọ bụ n'elu piling na mpempe akwụkwọ. Ọ nwere ike ịrụ ọrụ na-esote ntọala, na-egbochi ihe mgbochi, na ọbụnakwa na ndagwurugwu ma ọ bụ ebe siri ike ebe ndị na-agagharị agagharị na igwe ndị ọzọ enweghị ike ịrụ ọrụ ma ọ bụ bụrụ ihe egwu ịnwale N'ezie, ndị na-akwọ / efere Bonovo nke efere nwere ike ime ka ndị ọrụ nwee nnukwu ogologo oge site na mkpakọ ma ọ bụ ịkwọ ụgbọ ala, na-eme ka ndị ọrụ pụọ n'ihe egwu nke ọgba ma ọ bụ kọntaktị akụrụngwa.
Ezubere Coupler Bonovo Mechanical Quick Coupler maka iji ya na OEM ahazi bọket na mgbakwunye. Bonovo Mechanical Quick Coupler na-enye usoro dị mfe na ngwa ngwa iji gbanwee bọket excavator na mgbakwunye.
Ọdịdị nke Bonovo Box Breaker bụ na shea ahụ na-ekpuchi ahụ ọkụ, na shei ahụ nwere ihe na-eme ka mmiri gwụ, nke na-emepụta ihe nchekwa n'etiti ahụ hama na shei ma na-ebelata ịma jijiji nke onye na-ebu ya. Uru nke Bonovo Box Breaker bụ na ọ nwere ike inye nchekwa dị mma na ahụ hama, obere mkpọtụ, belata vibration nke onye na-ebu ya, ma dozie nsogbu nke shea rụrụ. Nke a bụkwa isi omume na mmepe nke ahịa ụwa.